America's Got Talent (မကြာခဏ AGT အဖြစ်အတိုကောက်) တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားကနေအမေရိကန်အခွက်တဆယ်ပြပွဲယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်တယ်, Simon Cowell တို့ကတော့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Got Talent: ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 2005 ခုနှစ်ဗြိတိသျှထုတ်ဝေများအတွက်အစီအစဉ်များကိုဗြိတိသျှထုတ်လွှင့် ITV အတွင်းအငြင်းပွားမှုအောက်ပါဆိုင်းငံ့ပြီးနောက်အဆိုပါအစီအစဉ်, ဇွန်လ 21, 2006 ရက်တွင် premiering, Fremantle USA နဲ့ Syco Entertainment ကထုတ်လုပ်ဟောင်းများကဖြန့်ဝေလျက်, အား NBC ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်ပေါ်မှာထုတ်လွှင့်လျက်ရှိ၏ ထုတ်လုပ်မှုအကြာတွင်တစ်ခုချင်းစီရာသီအဓိကအားကွန်ယက်ရဲ့နွေရာသီအချိန်ဇယားစဉ်အတွင်း run ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပရိုဂရမ်ရဲ့သမိုင်း၏သင်တန်းကျော်အမျိုးမျိုးသောကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် featured ထားပြီး 2007 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်စတင်မယ်လို့; လက်ရှိအိမ်ရှင်တယ်ရီအမှုထမ်းသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသီချင်းဆို, ကခုန်, ဟာသ, မှော်, position နဲ့ဆက်ဆံ, အမျိုးမျိုးနှင့်အခြားအမျိုးအစားများကနေအထိလုပ်ရပ်များနှင့်အတူ, စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့အဘယ်သူသည်အခွက်အချို့ကိုပုံစံအပိုင်ယူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားနှင့်ပြည်ပကနေ, သင်တန်းသားများကိုအမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်။ တရားသူကြီးတစ်ဦး panel ကိုအထင်ကြီးအားဖြင့်တစ်ဦးရာသီ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်စဉ်များအတွက်နေရာတစ်နေရာ secure ဖို့ကြိုးစားမှု auditions တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူ။အသက်ရှင်သောဖြစ်စဉ်များထဲသို့စေသောသူတို့ကိုတတိယကတည်းကအနိုင်ရအဓိကအားအချိန်တစ်ကာလအတွင်း paid ကြီးမားတဲ့ငွေသားဆု, အားလက်ခံတွေ့ဆုံရှိရာတိုက်ရိုက်ဗိုလ်လုပွဲ, ရောက်ရှိရန်အလို့ငှာတရားသူကြီး နှင့်ပြည်သူ့ရဲ့နှစ်ဦးစလုံးမဲအရေအတွက်အဘို့အသီးအသီးကိုအခြားဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း, ရာသီ, ခေါင်းစဉ်ဟာ Las Vegas မှ Strip တွင်တစ်ဦးပြပွဲမှအခွင့်အလမ်း။
↑ "Brandy Says She's Leaving 'America's Got Talent'"၊ April 20, 2007။ June 14, 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Brad Paisley, Dwyane Wade, Ellie Kemper and Jay Leno join NBC's Summer Sensation 'America's Got Talent' as guest judges in upcoming telecasts" (Press release). NBCUniversal. July 10, 2019. Retrieved July 15, 2019.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=America%27s_Got_Talent!&oldid=507803" မှ ရယူရန်
၂၄ မတ် ၂၀၂၀၊ ၁၉:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။